အပိုဆောင်းစကား.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Literature/Books » အပိုဆောင်းစကား..
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Jul 25, 2011 in Literature/Books | 13 comments
လူတွေဟာသိပ်အံသြဖို့ကောင်းတယ် စိတ်နေစိတ်ထား အပြောအဆို အမှုအကျင့် အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ဗျ
တစ်ဦးနဲတစ်ဦး အကျင့်စရိုက်ခြင်း အပြော အဆိုခြင်း ဘယ်လိုမှ မတူညီနိုင်ကြဘူးလေ
အဲလိုမတူညီကျတဲ့ အခြေအနေမှာ မလွဲပေမယ့်နည်းနည်းကွဲသွားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ လူတော်တော် များများကို
စကားကိုလူတိုင်းနေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ပြောဆိုနေကြရတယ် အဲလိုပြောဆိုတဲ့စကားတွေမှာ လူတစ်ချို့ဟာ
မိမိကိုတိုင် အမှတ်မထားမိပဲ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ ပြောဆိုမိတဲ့ ရေရွတ် ပြောဆိုတဲ့စကားတွေ ရှိ တတ်ကြတယ် အပိုဆောင်းစကားတွေပေါ့
မိမိကိုယ်တိုင်တော့ သတိမထားမိပေမယ့် တဖက်ကနားထောင်းရသူဟာ ပြောဆိုသူရဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ရေရွတ် သုံးစွဲ
ပြောဆိုလာတဲ့စကားကို အကြိမ်ကြိမ် ကြားလာရရင် သတိထားမိလာတတ်တယ် …..
အဲဒီလိုထပ်ခါထပ်ခါပြောဆိုခြင်ဟာ အကျင့် ကြောင့်ဖြစ်ပြီး အဲလိုထပ်ခါထပ်ခါပြောဆိုမှသာ စကားပြောတဲ့နေရာမှာ
စိတ်ပါလက်ပါရှိတယ်လို့မိမိကိုကိုယ် ထင်တဲ့အတွက် မိမိကိုတိုင် အကြိမ်ကြိမ် ရေရွတ်ပြောဆိုမိနေတဲ့ စကားကို
အခုခေတ် ရုပ်သံ အင်တာဗျူးတွေ။။။။။
တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခန်းတွေ ။။။။။
မှာဆိုရင် ခေတ်ပေါ် ပေါ်ပင် စကားတစ်လုံးလိုဖြစ်နေတဲ အပိုဆောင်း
စကားတစ်ခုတောင် ရှိပါတယ် အဲဒီစကားကတော့………………………..
“““ အဲ…. ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဆိုရင်ပေါ့နော်”””တဲ့
မြန်မာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေအပြင် မင်းသားတွေပါ မက တစ်ချို့သောအင်တာဗျူများမှာပါ အဲဒီ စကားကို ထပ်ခါထပ်ခါ
ပြောဆိုသုံးစွဲလေ့ရှိကြလွန်းလို့ ဒီစကားတစ်လုံးဟာ လူတော်တော်များများနောက်ပြောင် ပြောစရာစကားတစ်ခုအဖြစ်
ဒါဟာဘာလဲဆိုရင် စကားတစ်ခုကို မိမိကိုယ်တိုင်သတိမထားမိပဲ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ သုံးစွဲပြောဆိုလိုက်တဲ့ အတွက်
တစ်ဖက်နားထောင်သူများ သတိထားမိပြီး နောက်ပြောင်စရာ ကဲ့ရဲစရာများဖြစ်လာတတ်တယ် ဆိုတာကိုဖေါ်ပြနေခြင်းပဲ
ကျွန်တော်ဟာ သိပ်မရင်းနှီးတဲ့ သူများနဲ့ တွေဆုံတဲ့အခါမှာ စကားအပြောအဆို နည်းပေမယ့် ရင်နှီးသူမိတ်ဆွေများကြားမှာတော့
ကျွန်တော်ရောက်လာရင်းဟာသလေးတွေပြော ပုံတိုပါတ်စလေးတွေနဲ့ စကားကိုပြောတတ်လွန်းလို့ ခင်မင်ကြသူအတော်အတန်များပါတယ်
တစ်ခါတစ်ရံ စကားပြောရင်း ပျင်းလာရင် သူငယ်ချင်များက ““လုပ်ကွာ မှတ်မှတ်သားသားတစ်ခုလောက်ပြောစမ်းပါလို့””တောင်းဆို
တတ်ကြပါတယ်။။အဲလိုတောင်းဆိုတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော်ဟာ ရယ်စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောရင် ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ ပြောပြလွန်းလို့
အဲဒီခေါင်စဉ်လေးတွေကို ပြောလိုက်တာနဲ့ပဲ အကြောင်းအရာကိုမှတ်မိပြီး ရယ်တတ်ကြပါတယ်။။ အဲဒီအကြောင်းလေးတွေကို ။။
တစ်ပါတ်စာ… အမောပြေဟာသ မှာထည့်ရေးလိုမရတဲ့ ခါးအောက်ပိုင်း ရီစရာလေးတွေများပါတယ်။။။မိတ်ဆွေများဆုံတဲ့အခါမှာ
သူစိမ်းကပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရှေ့မှာလတ်တလောကြုံလာတဲ့ အဖြစ်အပျက်အပေါ်မှာ
ဇ၀န ဥာဏ် နဲ့ ချက်ချင်းဟာသလုပ်တတ်ပါတယ်……
အဲဒီလိုဟာသလုပ်တတ်လွန်းလို့ ဘဲ ဒီအကြောင်းလေးရေးမိတာပါ…။။။။
ကျွန်တော့်မှာ ဦးလေးသုံးယောက်ရှိပါတယ် နှစ်ဦးကတော့ သုံးဝမ်းကွဲ လောက်ခြားတဲဦးလေးဖြစ်ပြီး
တစ်ဦးကတော့ ခုနှစ်ဝမ်းကွဲလောက် တော်တဲဦးလေးတွေပါ ဆွေမျိုးဝေးပေမယ့် အနေနီးလို့ ခင်မင်မှုက
ဆွေမျိုးအရင်းတွေထက်ပိုပါတယ်..သူတို့ဟာကရင်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး သူတိုနာမည်တွေဟာ အတန်ငယ်ရီစရာကောင်းပါတယ်
သူကတော့ ကရင်သာပြောတာအသားကမဲတူးလို့ နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ ဆံပင်ကဘုတ်သိုက် အင်္ကျီ ကတော့ အရှင်းမ၀တ်တာ
အပေါ်ပိုင်ဗလာကျင်းပြီး ပုဆိုးကိုနံငယ်ပိုင်းသာသာထင်ရအောင်ဝတ်ထားတတ်တာဗျ စကားပြောရင်တော့ အကျအနပဲဗျို့
အာလုပ်သံကြီးနဲ့ အားရပါးရပြောတတ်တယ်လေ…တစ်ခုပဲဆိုးတာက သူပြောလိုက်တိုင်း ပြောလိုရာစကားမစမှီ ပြောမဲ့အကြောင်း
အရာကိုအရင်းမပြောဘဲ ..စကားရှေက နေ ““ဒီပုံဒီနည်း”” ဆိုတာကြီးကို အကြိမ်ကြိမ်ထည့်ပြောတတ်တာပါပဲ….
သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာ ဘာမှန်းသာမသိရသေးတာ အဲဒီ ““ဒီပုံဒီနည်း ””ကြီးကခဏခဏ ကြားနေရတော့တာပဲ….
တစ်နေ့တော့ သူပြောတာကြီးနားထောင်ပြီးစိတ်နည်းနည်း ပေါက်လာတာနဲ့ဘေးကနေ သူ““ဒီပုံဒီနည်း””ဆိုပြီး ဆက်မပြောနိုင်ခင်
ကျွန်တော်က အရှေ့ကနေပိတ်ပြီး မေးလိုက်ပါတယ်..
“““ဘယ်ပုံဘယ်နည်းလဲ ဦးလေးရ သေချာရှင်ပြမှပေါ့”””
ပထမတော့ သူကြောင်သွားတယ်ဗျ ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီး မေးတာကိုဂရုမစိုက်ပဲသူစကား သူဆက်ပြောတယ်
နောက်တစ်ကြိမ် သူ့ရဲ့““ဒီပုံဒီနည်း””ကြီးထပ်ပြောလာပြန်တော့ ကျွန်တော်ကပဲ
“““ဦးလေး ဘယ်ပုံဘယ်နည်း လဲသေချာရှင်ပြပါဆိုနေမှ””
ဧည့်သယ် တွေကလဲ သုံးယောက်လောက်ရှိတာကိုးဗျ..။။
ကျွန်တော်အသာငြိမ်နေလိုက်တယ် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြောရင်ထပ်မေးဘို့လည်းစိတ်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားတယ် မရီမိအောင်လဲ
ထိမ်းထားရသေးတယ်ဗျ သူပြောတဲ့““ဒီပုံဒီနည်း””ကြီးက ရီချင်စရာကြီးကိုးဗျ။။။။
““ဦးလေးကလဲ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းလဲ ပြောပါဆို မပြောဘူး”””လို့ထအပြောမှာတော့ ဦးလေးဟာ
“““ဝေး ဒီကောင်ရန်ကုန်သား”” ဆိုပြီးခေါင်ရင်းက ထောင်ထားတဲ့ တံပိုးကို ဆွဲကာ ထလိုက်ပါတော့တယ်။။။
ဘာပြောကောင်းမလဲ ကျွန်တော်လည်း အော်ရယ်ပြီး အိမ်ပေါ်က ခုန်ချဆင်းပြေးရတော့တာပဲဗျို….
နောက်နောင် စကားပြောရာနေရာတွေမှာ ကျွန်တော်ရှိနေရင် သူ့ရဲ့“““ ဒီပုံဒီနည်း””ကြီးကိုသိပ် မသုံးတော့တာပါပဲ။။။
သူကလည်းကရင်ပါပဲ ဒါပေမယ့်သူကတော့ လူရည်လယ် တယ်ပြောရမလားပဲ ရန်ကုန်မှာနေတယ်
ညာဘက်လက်က လက်ညိုးတစ်ချောင်းမရှိလို့ သူရွာကလူတွေက ကိုးချောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်
ငယ်ငယ်က မီးရထားလမ်းဘေးဆော့နေရင်း မီရထားလာတာသံလမ်းပေါ်လက်ညိုးတင်ထားရင်ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးဆိုပြီး
တင်ထားလိုက်တာ ….အဲဒီထဲက ကိုးချောင်းပဲ ရှိတော့တာပါတဲ့….
သူလဲဒီလိုပဲဗျ စကားပြောရင်ကျောက်ဆင်းတု ခေါင်းညိမ့်အောင်ပြောနိုင်တယ် သူစကားပြောရင်လူတွေညိမ်ပြီးနားထောင်နေတတ်တယ်လေ
တစ်နေ့ …..သူစကားပြောနေရာစကားဝိုင်းမှာ ကျွန်တော်လည်းဝင်နားထောင်တာပေါ့ လူကြီးတွေကဘာမှမပြောပေမယ့်
သူခဏခဏ ထည့်ထည့်ပြောတဲ့ ““လက်ဦးနက ပြောသလို””ဆိုတာကြီးကိုနားကြားမျင်းကပ်လာတာနဲ့…..
ကျွန်တော်ကပဲ….“““ဦးလေး ဦးလေး ခုဏပြောတဲ့ “““လက်ဦးနက ပြောသလို””ဆိုတာက လက်ဦးန တုန်းက ဦးလေးကဘာပြောခဲ့လို့လဲ”””
“““ဟာ..ဦးလေးကလဲ လက်ဦးနက ပြောသလို တွေကများနေပြီး လက်ဦးနက ဘာပြောလိုက်တာလဲမေးတော့လဲမဖြေဘူး”””
စကားအဆုံးမှာပဲ ဦးလေးဟာဘာမပြောညာမပြောကျွန်တော့ ထိပ်ကို ထခေါက်ပါတော့တယ်…
ဒီအခါကျမှ ကျွန်တော့်အဖေ ကမင်းကလည်းဟုတ်တာပဲကလေးမေးလဲမေးချင်စရာ“““လက်ဦးနက ပြောသလို””
ဆိုတာတွေကများနေတော့ ..ကလေးကမေးတော့တာပေါ့ကွ ။။။လို့ဝင်ပြောမှပဲ သက်သာရာရခဲ့ပါတော့တယ်။။။
သူကတော့ တစ်မျိုးဗျ သူလဲကရင်ပဲ စကားထစ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး စကားပြောစရာရှိရင် ပြောစရာရှိတာကို
တိုက်ရိုက်မပြောပဲေ၇ှကနေ ““ဟိုနင်းဟိုနင်း””နဲ့ သုံးလေးခွန်ထပ်ပြောပြီးမှလိုရာရောက်တော့တာပါပဲ
သူနဲ့ကအသက် မတိမ်းမယိမ်းမို့ ပေါ်တင်ကြီးပဲပြောတာပဲဗျ..
တစ်ခါတစ်လေများ အဆက်အစပ်မရှိ ထထလုပ်တတ်သေးတယ်
စကားပြောတိုင်းဟိုနင်း ..ဟိုနင်းဆိုတာကြီးကိုထည့်ထည့်ပြောတတ်လို့ ဖုန်းဖိုးလဲကုန်ပေါင်းများပြီလေ
သူကျွန်တော်ဆီဖုန်းဆက် တိုင်း““ ဟဲလို..ဟိုနင်းဟိုနင်း ””အဲလိုဆိုကျွန်တော်က သိသိကြီးနဲ ကျွန်တော် ဟိုနင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ..
ဖုန်းမှားနေပါတယ်ဆိုပြီး ဖုန်းချပစ်လိုက်ရင် ….သူ ထပ်ခေါ်ပြီး..ဒေါကန်တော့တာပါပဲ
သူလဲခုချိန်ထိ စကားပြောတိုင်း “““ဟိုနင်း””ကြီးကတော့မပါမပြီးပါပဲ။။။။
ဒါကြောင့် လူအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့အထဲက စကားပြောဆိုကြတဲ့နေရာမှာ လူအများ အကြားကောင်းအောင်
ပြောစရာစကားများအရှေ့က မလိုလားအပ်တဲ့ အပို ဆောင်းစကားများကြောင့် လူအများ၏ လှောင်ပြောင် စနောက်ခြင်းမှကင်းဝေးနိုင်စေရေး
မိမိတို့ရဲ စကားအကျင့်များ သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဤ အကြောင်းအရာလေးဖြင့် သတိပြုစေနိုင်ခြင်းငှာ
အစ်ကို ogre လည်းကျွန်တော်နဲ.တူတူပါပဲလား
ကျွန်တော်တို.ရွာက ဦးကုလား လည်း သူစကားပြောရင် ပုံနှိုင်းလေနဲ.ဗျ
မင်းတို.လုပ်ပုံကလည်း (ဟိုဟာပြောသလို) ကျနေပြီဆိုတာအမြဲပါတယ်
ဘယ်သူပြောသလိုလဲ ဦးကုလားရဆိုတော. စိတ်တိုပြီး လိုက်ရိုက်တာခံရဖူးတယ်
ဟားဟား ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အရေးအသားလေး ဗျာ
ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကို ရေးတင်ထားတာပဲ
ကိုဘီလူး ရဲ့ပို့ စ်များ ကို ဆက်လက် စောင့်မျှော် အားပေးနေမည် ဖြစ်ကြောင်း ။
ကျွန်မဦးလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် “နောက်ဘိတ်ဆုံး” ဆိုတာ ခဏခဏ ထည့်ပြောတယ်၊ စကားစကတည်းကပဲ။
ရုံးက အထက်လူကြီးတစ်ယောက်ကတော့ “ဟိုဥစ္စာ” ဆိုတာ မြဲပြောတယ်၊ စကားထောက်လို ဖြစ်လို့…
ကျွန်မလည်း အဲ့ဒါမျိုး သတိထားမိခဲ့တယ် … ။ သူများတွေ စကားပြောတဲ့အခါ သတိထားမိလို့ … ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စမ်းစစ်တဲ့အခါ … ။ အပိုအလိုလေးတွေ ထည့်မပြောပဲ … ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း လိုသလောက် ပြောတတ်တဲ့ ကျွန်မကို … အမေက ကောက်ချက်ချတယ် … ။
စကားပြောတာက အပိုအလိုတွေ ထည့်မပြောတတ်တာရယ် … အသံက သူများတွေလို ပဲသံ၊နှာခေါင်းသံ … ကြောင်အော်သံလိုဟာတွေ … မပါတာရယ် … တစ်ခုခုဆို ဒဲ့ပြောတတ်တာရယ် ၊ စကားပြောတဲ့ အထရက်ရှင် မရှိတာရယ်ကြောင့် … အပျိုကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ ဟင့်
တုန်မမလား အပျိုကြီးဖြစ်မှာ ဝေးသေးတယ်
etone ကအပျိုကြီးဖြစ်မှာ စိုးကြောက်နေတာလား
စကားပြောရင် တုံးတိတိပြောတာကိုပဲ သဘောကျတဲ့ သူရှိပါတယ်တဲ့
အဲတော့ အမေကိုပြန်ပြောလိုက်ပါ သမီး အပျိုကြီး မဖြစ်ပါဘူးလို့ ……..
အပျိုကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခဏခဏပြောတယ် …(အဲ့ဒါ အမေက ရွဲ့ ပြောတာသိလား … ) ဒါမှ မခံချင်စိတ်နဲ့ ချက်ချင်းလက်ငင်းကောက်ယူအောင်လို့ …. ။ ထိန်းရသိမ်းရခက်လွန်းပြီး ဂျစ်ကန်ကန်မို့လို့ တဲ့ …
ဘယ်လိုပြောရမလဲ ပေါ့လေ.. လာလည် စာဖတ်တယ်ပေါ့… ဟိုကားထဲ ဟိုတစ်ယောက်လေ.. အဲလိုတော့ ပြောတတ်တဲ့အကျင့်ကို တော်တော်များများဆီမှာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီစာဖတ်မိမှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားပြောရင်ဘာတွေထည့်ထည့်ပြောတတ်လဲဆိုတာ သတိထားကြည့်ရအုံးမယ် ………
ကျနော်လည်း ဘကြီးတစ်ယောက်ကိုကြုံဘူးတယ်၊ စကားပြောရင် ရှေ့ကနေ ဘဘက သမီးတို့၊ သားတို့ကို ရီစရာလေးပြောရဦးမယ် ဆိုပြီး ဘာမှမပြောသေးခင်၊ အဲ့ဒီစကားပြောတော့ ကျနော်တို့လည်း အစကမသိတော့ တကယ်ရီစရာပြောမယ်ထင်ပြီး နားထောင်မိကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် သူမေးချင်တာ၊ သူပြောချင်တာတွေ ပြောပြီး စကားဆုံးရင်လည်း ဘဘကရီစရာလေးပြောရဦးမယ်ဆိုပြီး ပြောတတ်တယ်၊ ကျနော်တို့လည်း ရီစရာပြောမယ်ဆိုလို့ နားထောင်နေတာ၊ ဘာရီစရာမှလဲမပါဘူးလို့ပြောတော့မှ အစ်မတစ်ယောက်က အဲ့ဒါ ဘကြီးရဲ့ အကျင့်တဲ့၊ စကားအစနဲ့ စကားအဆုံးမှာ ဘဘကရီစရာလေးပြောရဦးမယ်လို့ပြောတတ်တယ်တဲ့………………
ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ လာပါဦးပေါ့။
ဟိုဒင်းဆိုတော့ ဟိုဟာပေါ့ နော်။